Shiinaha 100% jaakada dharka jilicsan ee biyaha aan lahayn ee Polyamide ee ragga warshad iyo soosaarayaasha | Ruisheng
3 Gudaha 1 JACKET
JOOJI FLEECE JACKET
Dharka dharka lagu xiro
Jaakadaha muraayadaha banaanka ku shaqeeya ...
Raga Yoga Dharka Caloosha Con ...
Ciyaaraha ugu caansan ee cusub ...
100% Polyamide s biyuhu ...
Tayada ragga oo tayo sare leh ...
100% Dharka biyaha ee polyamide ee ragga
Waxqabadkayaga qolof jilicsan ayaa ku habboon dhammaan xaaladaha cimilada. Ski Resort, waa shey kulul oo saaran doomaha iyo magaalooyinka adduunka oo dhan. Muuqaalka cayaaraha, diirimaadka iyo ilaalinta qof kasta oo leh jaakad jilicsan oo jilicsan ayaa arki kara kala duwanaanta dharka jilicsan ee jilicsan. Wax dhib ah malahan qulqulka iftiinka iyo dabaysha. Hadday ahaan lahayd mid jiiraad ah, mid raad raac ah ama baarka aad jeceshahay, jaakadani way xamili kartaa.
Qalabka: Ku habboon / loo habeeyay
Cabbirka: Cabbir kasta waa la heli karaa
Midab: Muuqaal sawir ama si gaar ah loo sameeyay.
Goobta asal ahaan Jiangsu, Shiinaha
Magaca Astaanta OEM
Nambarka Model jaakad jilicsan oo jilicsan
Logo Aqbal Astaanta Macaamiisha OEM
Cabbirka Cabbir kasta waa la heli karaa
Midabada Midabada La Codsaday
Fasalka Fasalka A
Waxyaabaha Polyester / Cotton \_ Customization, Wax la codsaday
Dhererka Gacanta (cm)
Qiimo Yar Tirada Weyn ee Wadahadalka Ah
Dharkeenu waa kuwo aan biyuhu xirin, dabayshu u adkeysan karin, cimri dhererna leh isla markaana deegaanka u habboon
2.Can naqshadeynta jeebka toosan oo ay ku jiraan boodhadh ka hortag ah + geerash biyuhu ka samaysan yihiin, oo ay ka mid yihiin qaabab kale oo loo habeyn karo
3. Tuubbada toosan ayaa loo adeegsan karaa gacanta, oo koodhka waxaa loo naqshadeeyay koronto go'an
4.Carafka waxaa loo qaabeyn karaa xarig laastik ah, baalal-ilmeedyo iyo balastarro caag ah, oo ka raaxeysan kara xirashada xaaladaha gaarka ah
1.Waxaan nahay hal adeeg bixiye hogaamiya kuna saleysan jingsu, Shiinaha, oo leh 10years khibrad ganacsi caalami ah. Waxaan u iibgeynaa 40 dal oo adduunka ah, oo ay ku jiraan Jarmalka, Faransiiska, Yurub, Mareykanka. Sanadihii la soo dhaafay waxaan celcelis ahaan kor u qaadnaa 50% isbeddellada.
2.Sameegeenna waxaa ku jira summad caalami ah oo badan. Qaarkood waxay xiriir nala leeyihiin 5-8 sano.
3.Waxaan leenahay 2 Kooxda Iibka: Dharka, Dharka. Iib kasta wuxuu leeyahay 8 sano oo khibrad shaqo ah. Waxaan ku siin karnaa adeegga Hal-Stop dhammaan badeecooyinka. Wada shaqaynta Kooxda Wanaagsan waxay dammaanad ka qaadi kartaa in looga jawaabo dhammaan noocyada weydiimaha 2 saacadood gudahood. Dhaqankayaga iibku waa horumar iyo wada shaqeyn.
Hore: Raga tayada sare leh ee ragga SoftshellJacket Bannaanka
Xiga: Ciyaaraha ugu caansan ee cusub ayaa loo daabacay ragga Shiinaha
Raga suufka Polo Shirt Dharka dharka Polo ...
Jaakada Ski xirfadeed tayo sare leh windproof ...
Ragga Ragga 3 ah ee 1 jaakad roobaadka roobab wata Custom OEM
Ragga bannaanka u ah daboolka jaakad dabacsan oo xirfad sare leh ...
ragga Yoga Dharka Timaha Xakamaynta kacsan ee Woqooyi ...
Shiinaha 100% rag cudbi ah oo dhar hurdo dhaadheer leh